Volana vaovao, fomba fiaina vaovao… | NewsMada
Volana vaovao, fomba fiaina vaovao…
Mafimafy iny volana febroary nivalona iny. Nanjakan’ny fitakiana niafara amin’ny fitokonana, saika tamin’ny sehatra rehetra: mpianatra, mpanohitra, mpivavaka, mpivarotra ambony kalesa… Nisy mihitsy ny aina nafoy sy ny naiditra am-ponja tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana. Tetsy andaniny, sahirana ny sarambabem-bahoaka tamin’ny fanaovana ny asa fitadiavana andavanandro noho ny fanelingelenana ny toeram-pitadiavany vokatry ny savorovoro. Vao mainka sahirana, izay kely mba nihoriranana, voasembantsembana indray.
Fa iza ny mahazo tombontsoa amin’ny korontana eto e? Tsy mba ampy kosa ve izay efa niainana an-taony maro izay? Ny fanavotana ny firenena izay no tokony hatao vaindohan-draharaha. Sorona hatrany mantsy ny madinika rehefa misy tahaka ireny.
Nivalona iny ny volana febroary, miaina volana vaovao ny rehetra. Mba ho fomba fijery sy fiaina vaovao koa ny hanjaka manomboka eto. Sa mbola misy te hiaina anaty korontana? Safidiny izany ka aoka hahazaka izay nafafiny. Efa nilamina iny ny zava-niseho tany Toliara noho ny fandraisana andraikitra nataon’ny fitondram-panjakana. Fitokonan’ny mpianatra navadiky ny sasany ho fandrobana fananan’olon-tsotra. Hifampihinana sy hifamotika am-pitoerana eto isika mianakavy raha mitohy ny toy izany. Fomba fiaina vaovao no ilaina hisandratan’ny firenena amin’ny fahaizana mandanjalanja izay kasaina hatao rehetra.
Matoa manao zavatra ny tsirairay, vokatra tsara hatrany ny ao ambadiky ny ezaka ataony. Fanapoizinana sy fanolorana vato mafana ny hafa ny ankoatra izay. Mila fomba fijery vaovao ny rehetra: ilay fomba fijery miabo, ny lafy tsarany no banjinina fa tsy ny ratsy. Raha iainana izany, misongadina hatrany ny firaisan-tsaina mitondra mankany amin’ny fifarimbonana hanatsarana ny firenena. Asa vadi-drano ny fampandrosoana ny firenena ka tsy vita tsy ifanakonana. Mila ny fifanomezan-tanana anatin’ny fifankatiavana sy an-kitsipo fa tsy fihatsarambelatsiny. Izay mitabe, tsy lanin’ny mamba fa izay misaratsaraka kosa, miraraka toy ny fasika ka tsy hahatsangana na inona na inona.
Riposte à la crise: formation des travailleurs du tourisme 21/04/2021
Marché noir de médicaments : un bâtiment de stockage mis sous scellé à Ambohipo 21/04/2021